Maxaa ka soo baxay shirkii deg dega ahaa ee UN-ku ka yeesha xaaladda Soomaaliya? | XOG-DOON NEWS - Breaking News From Somalia
Home Wararka Maanta Maxaa ka soo baxay shirkii deg dega ahaa ee UN-ku ka yeesha...
Maxaa ka soo baxay shirkii deg dega ahaa ee UN-ku ka yeesha xaaladda Soomaaliya?
Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay ayaa wadatashiyo deg-deg ah ka yeeshay xiisadda siyaasadeed ee sii xumaanaysa ee Soomaaliya, taas oo halis gelin karta doorashooyinka qaran iyo amaanka guud dalkaan ku yaalla geeska Qaarada Afrika.
Danjiraha Qaramada Midoobey ee Britain Barbara Woodward, ayaa golaha ka hor aqrisay warbixin kooban oo uu u diray ergeyga gaarka ah ee Qaramada Midoobay James Swan, taas oo walaac xooggan ka muujiyay “xiisadaha sii kordhaya ee u dhexeeya ra’iisul wasaaraha iyo madaxweynaha.”
Kulanka oo daba socday bayaankii Madaxweynaha mudo xileedkiisa dastuuriga ah uu dhamaaday February 2021, Maxamed Cabdullaahi Maxamed ee khamiistii oo uu ku sheegay inuu hakiyay awoodda Ra’iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble oo ah in uusan samayn Karin xilka qaadis iyo magacaabist toona iyo jawaabta adeg ee uu celiyay wasiirka 1aad ee xukumadda.
Woodward ayaa sheegay in xiisada sii kordheysa ay saameyn ku yeelan doonto geeddi-socodka doorashada ayna u horseedi karto qalalaase dastuuri ah oo sii xumaynaysa xaalada dalka oo markii hore wajahayay dagaal joogto ah, gaajo, ayax iyo Covid-19.
Soddon sano oo fowdo ah, laga soo bilaabo Hogaamiye kooxeedyadii, Al Shabaab oo xiriir la leh Al Qaacida iyo soo bixitaanka Daacish, ayaa burburiyay waddanka oo dhawrkii sano ee la soo dhaafay muujiyay soo kabasho.
Woodward ayaa sheegtay in Golaha Ammaanku uu sii wado cadaadiska si dib loogu soo celiyo geeddi -socodkii doorashada iyo “in la arko ra’iisul wasaaraha iyo madaxweynaha oo si degdeg ah u xallinaya khilaafkooda … si loo xaqiijiyo amniga, nabadda iyo deggenaashaha Soomaaliya u baahan tahay.”
Xubnaha goluha ayaa sheegay in ay aad uga walaacsanyihiin khilaafka joogtada ah ee ka dhex jira dawladda Soomaaliya iyo saamaynta taban ee ku aaddan jadwalka doorashada iyo geeddi –socodka iyada oo codsaday doorasho aan dib u dhac lahayn iyo xasilooni waarta”.
Qaramada Midoobay ayaa dhammaan dhinacyada ku boorisay “in ay khilaafkooda ku xalliyaan wadahadal” oo ay mudnaanta siiyaan qabashada doorashooyinka si waafaqsan heshiiskii May 27 ee dhigayay in doorashooyinka dadban la qabto sannadkan.
Qoraalka qabyada ah ayaa sidoo kale ku booriyay dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada “in ay hubiyaan in wixii khilaaf siyaasadeed ah aysan ka weecin tallaabo mideysan oo ka dhan ah Al-shabaab.”
Ergayga Britain ee UN-ka, Woodward e ayaa sheegay in ay ku caddahay warbixinta kooban oo Swans la wadaagay golaha amaanka ee Qaramada midoobay in ay sii xumaanayso xaaladda wadanta inta laga xalinayo khilaafaadka u dhexeeya madaxweynaha iyo ra’iisul wasaaraha.
“Laakiin xaqiiqdu waxay tahay, in khilaafku abuuri doono xaalad ka khatar badan tan hada jirta oo ah in laga gaabiyo hawsha asaasiga ah ee ah oo ah in doorashada la sii wado,” ayay tiri. “Khatarta ka jirta Soomaaliya waxaa ka mid ah in Al-Shabab la siiyo boos badan, tani waa khatar aad u sarreeya runtii. Marka, waxaan rabnaa inaan sida ugu dhaqsiyaha badan uga baxno xaaladdan oo aan xallino.” Ayay tiri.
Cadaadiska ayaa ku sii kordhayay Farmaajo tan iyo markii uu ku guuldaraystay in uu dalka doorasho ka hirgaliyo 8 -dii Febraayo.
Wadahadalladii u dhexeeyay dowladda federaalka iyo hoggaamiyeyaasha gobollada oo billowday bishii Maarso ayaa burburay horraantii Abriil. Codsiga madaxweynaha, ka dib aqalka hoose ee baarlamaanku wuxuu meel mariyey sharci gaar ah oo kordhiyay muddo xileedka mudo xileedka Farmaajo muddo laba sano ah iyo hakinta heshiiskii doorashooyinka dadban ee Sebtember 17, 2020, taas beddelkeedana loo rogo doorasho qof iyo cod ah.
Go’aamadaasi waxay dhaliyeen mucaaradad baahsan, taasoo horseeday in la abaabulo malleeshiyaad, iyadaoo ay soo shaac baxday kala qaybsanaan ka dhex jirtay ciidamada ammaanka ee Soomaaliya, waxaana ka dhashay iska horimaadyo xooggan 25 -kii Abriil.
Iskahorimaadka ka dib, madaxweyne Farmaajo wuxuu 1 -dii May ka codsaday aqalka hoose ee baarlamaanka in ay ka noqdaan tallaabooyinkii ay ka mid ahaayeen in muddo kordhin loo sameeyo muddo laba sano ah.
Wuxuu ka codsaday xildhibaannada I nay taageeraan heshiiskii ay dowladda federaalku la gashay dowlad -gobolleedyada 17 -kii Sebtembar ee la soo dhaafay si loo sii wado cod -bixinta, wuxuuna ka codsaday ra’iisul wasaare Rooble inuu hoggaamiyo diyaarinta doorashada iyo tallaabooyinka amniga ee la xiriira. Tani waxay horseeday heshiiskii May 27 ee ku saabsanaa qabashada doorashooyin dadban sannadkan.
Af-hayeenka Qaramada Midoobay Stephane Dujarric ayaa Jimcihii sheegay in iyadoo Soomaalidu ay xusayaan sannad-guuradii 1-aad ee heshiiskii 17-kii Sebtembar, QM iyo saaxiibadeeda caalamiga ah “ay aad uga walaacsan yihiin in khilaafka sii xoogeysanaya ee u dhexeeya madaxweynaha iyo ra’iisul wasaaraha uu wiiqi doono xasilloonida Soomaaliya iyo marin habaabinta. habka doorashada. ”
Previous articlePuntland iyo Gamudug oo heshiis is afgarad ah ka gaaray colaada Dhabbad iyo Galinsoor
Next articleBaarlamaanka Carabta oo ka digay in Khilaafka Farmaajo & Rooble uu saameeyo Amniga iyo Doorashada.